ReporterNepal Updating you… » कुरा कर्णालीको
काठमाडौं । राजधानीबाट टाढा रहेको कर्णाली प्रदेश बेलामौकामा सामाजिक संजाल अनि पत्रपत्रिकामा राम्रैसंग छाउने गर्दछन् । कहिले भौगालिक विकटता, कहिले सामाजिक विकृति र कहिले भोक र अनिकालका कुराहरु । अहिले पून एकचोटी चर्चामा आएको छ कर्णाली प्रदेश तर यसपालीको विषयवस्तु भने विल्कुल फरक छ । यस विषयवस्तुको मुख्य पात्र हुन मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही ।
को हुन त महेन्द्र बहादुर शाही ?
महेन्द्र बहादुर शाही कर्णाली प्रदेशका प्रथम मुख्य मन्त्री हुन् यस भन्दा पहिले उनी देउवा नेतृत्वको सरकारमा उर्जामन्त्री रहेका थिए । उर्जामन्त्री भएको अवधीमा महेन्द्र बहादुर शाहीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका विरुद्ध संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएकाले प्रस्तावकको रुपमा निकै चर्चामा आएका थिए । महेन्द्र बहादुर शाही माओवादीका इमान्दार नेताको छबी बनाएका नेताको रुपमा पनि चिनिन्छन् । माओवादीका पूर्व लडाकू कमान्डर रहेका शाहीको कालीकोटमा युद्धकालमा माओवादी संगठन बिस्तारमा ठुलो योगदान रहेको छ । पार्टीमा ‘प्रज्वल’ उपनामले चिनिने शाही ६ नम्बर र ७ नम्बर डिभिजनको कमाण्डर बनेका थिए । उनले माओवादी लडाईंका ठूला(ठूला मोर्चामा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
वास्तवमा के भएको थियो रारा कर्णाली पर्यटन उद्घाटन वर्षमा ?
मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई बेलावखत भ्रष्ट्राचारिको आरोप लाग्छ । पछिल्लो वेला रारा कर्णाली पर्यटन वर्ष उद्घाटन कार्यक्रममा ७८ लाख भ्रष्टाचार गरेको भनि सामाजिक संजालमा एकप्रकारको हुईया नै मच्चाईएको छ । मुख्यमन्त्रीले आफुले गरेको भ्रष्ट्राचार लुकाउन भ्रष्ट्राचार विरोधी अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीलाई गिरफतार गराएको आरोप लगाउन पनि पछि परेनन ।
आखिर वास्तविकता के हो त रु मुख्यमन्त्रीको भ्रष्ट्राचार विरुद्धको प्रतिवद्धता के छ रु किन मुख्यमन्त्रीमाथि भ्रष्ट्राचारको आरोप लगाईन्छ रु सर्वसाधारणमा जिज्ञासा पैदा हुनु स्वभाविकै छ । मुख्यमन्त्रीलाई लागेका आरोपका सन्दर्भमा हामीले केही तथ्य केलाउन खोजेका छौं ।
आखिर के गरे मुख्यमन्त्रीले ?
मुख्यमन्त्रीलाई किन लाग्छ आरोप ?
‘लडाकु कमाण्डरको विराशत वोकेर युवा अवस्थामै राजनीतिमा महत्वपुर्ण सफलता हाँशील गरेका शाहीको राजनीतिक लक्ष्य महत्वकाँक्षी देखिन्छ । मुख्यमन्त्री शाही स्वार्थी समुहको घेरामा फसेर आफनो उज्यालो राजनीतिक भविश्य चौपट पार्न चाहदैनन । उनको राजनीतिक भविश्यको उचाई आँकलन गर्दै डाहा गरिरहेको समुह पनि उनका विरुद्ध भ्रमको खेति गर्न, विवादित गराउन र असफल वनाउन सक्रिय देखिन्छ । यिनै स्वार्थहरुको परिणाम मसला सहित मिडियामा आएका भ्रष्ट्राचारी, गफाडी र असक्षम जस्ता विशेषणले भरिएका समाचार पढ्न मुख्यमन्त्री वाध्य हुनुपरेको मुख्यममन्त्रीको सचिवालय स्रोत बताउँछ ।